Lamaody - Bezzia | Bezzia
Fashion amin'ny ankapobeny, dia ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fomba fitafian'ny olona amin'ny fotoana rehetra, na ny firafitry ny fironana sy ny fomba azon'ny olona amin'ity sehatra ity. Noho io antony io, Bezzia dia tsy afaka ny tsy eo amin'izao tontolo izao, izay misy ny karazana isan-karazany sy ny marika amin'ny loko rehetra, ka manantena izahay fa handray azy rehetra.
Ho eo ihany koa isika amin'ny catwalks, vaovaon'ity seha-pihariana ity, hanaraka ny vaovao momba ny anarana mety eto amin'ity tontolo ity izahay ary hasehonay anao amin'ny ohatra izay maodely tokony harahinao ary iza no tsy.
Ary farany, hanaraka ny ohatry ny olo-malaza mahita ny tsiambaratelon'ny fomba fitafian'izy ireo izahay ary hiezaka ny handika ny akanjon'izy ireo.
Loafers, ny mpanjakan'ny fitafiantsika amin'ny fararano
ny Maria vazquez hace 1 andro .
Safidy tonga lafatra ao anatin'ny antsasak'adiny ny Loafers na dia tsy izy irery aza. Ireo kiraron'ny lehilahy amin'ny ankapobeny vita amin'ny hoditra dia ...
Ireo blouse sy lobaka efa mandresy any Zara
Efa tonga tamin'ny vanim-potoana vaovao isika miaraka aminy, hieritreritra ny endrika lamaody manaraka. Zara toa ...
Ny zipo Denim dia mamerina ny toerany amin'ity Fahalavoana ity
ny Maria vazquez hace Andro 5 .
Hitanay izy ireo tao amin'ny katalaogin'i Adolfo Dominguez, Mango ary Zara, miaraka amin'ireo orinasa hafa. Ny zipo denim dia toa tadiavina ...
Fanangonana kapsula vaovao avy any Zara miaraka amin'ny Kassl
ny Maria vazquez hace Andro 6 .
Vao haingana i Zara no nanangana ny "Kassl Edition", fanangonana kapsily vaovao izay hanambara ireo tolo-kevitra ho an'ny olona maro manerantany ...
ny Maria vazquez hace 1 herinandro .
Manakaiky ny fararano nefa mbola maro ny andro, raha tsy fahavaratra, miaraka amin'ny mari-pana mahafinaritra sisa tavela ...
ny Susana godoy hace Herinandro 2 .
Misy kojakoja fototra ary avy eo ny kojakoja fironana izay ho hitantsika isaky ny vanim-potoana. Fa amin'ity…
ny Maria vazquez hace Herinandro 2 .
Rehefa tsapanay fa tsy nizara ny tolo-kevitr'i Malababa taminao izahay tamin'ny herintaona, dia tianay ny manamboatra azy….
Manafaka ny olona ity loko ity amin'ny loko
Raha nieritreritra ianao fa ny fararano dia hanery antsika hiverina amin'ny paleta miloko tsy miandany ary tsy maizina, diso ianao! ...
Akanjo miloko volontany sy volon-tany ho an'ny fararano
Nasongadin'i Toso fa ny volontany sy ny lokon'ny tany, amin'ny ankapobeny, dia hanana andraikitra lehibe amin'ny vanim-potoana manaraka. Ary na dia amin'ny fomba ofisialy ...
Fironana kiraro Stradivarius ho an'ny fararano sy ririnina
Ny fironana amin'ny kiraro amin'ny fararano sy ririnina dia eto. Eny, marina fa mandany vola be ...
Parfois dia mandray ny volana septambra amin'ny fiverenana miasa
ny Maria vazquez hace Herinandro 3 .
Nanambara i Parfois fa vonona hiatrika ny volana septambra izao. Izy io dia miaraka amin'ny trano fanontana vaovao Back To Work, izay ...
Ahoana ny fomba hahatongavan'ny zazavavy Tumblr
Famerenana ny lamaody tamin'ny taona 90
Famerenana ny lamaody tamin'ny taona 60
Fomba fitafiana amin'ny mariazy iray andro
Fitsangatsanganana amin'ny lamaody tamin'ny taona 80
Ny lamaody tamin'ny taona 50, fomba izay mametraka fironana hatrany
Lamaody tamin'ny taona 70
Mamolavola ny akanjonao manokana
Kiraro ho an'ny vehivavy manana tongotra lehibe
Ahoana ny fanesorana ireo ratra amin'ny kiraro hoditra
Akanjo fety lamaody
Fetsy hanavahana ny kiraron'ny Dr. Martens tena izy avy amin'ny knockoffs
Fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana kiraro
Haben'ny kiraro amin'izao tontolo izao